ကုမ္ပဏီ၏အလယ်အလတ်တန်းစားမိုဘိုင်းအသစ်ဖြစ်သော Meizu E3 ကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့တင်ပြပါသည် Androidsis
နောက်ဆုံးတော့! ဤမျှလောက်များစွာသောကောလာဟလများ, ယိုစိမ့်နှင့်အခြားဒေတာပြီးနောက် Meizu E3 ဒီကနေ့တရားဝင်အဖြစ်တရားဝင်ဖြစ်တည်မှုကိုစတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းကပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖုန်းကိုမကြာသေးမီကတရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှန်ဟိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ခုမှာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်, ကျနော်တို့အတူတူပင်၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ပတ်သက်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပေးသောအတွက်ကုမ္ပဏီကလုပ်။
Meizu E3 တွင်အလယ်အလတ်တန်းစားလိုအပ်မှုကဏ္ features ကိုရည်ရွယ်သည့်အင်္ဂါရပ်များပါရှိသည် ၆ လက်မမျက်နှာပြင်၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သောရှစ် core core SoC နှင့် RAM memory သည်မျှော်လင့်ရဆုံးအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ ဒီကိရိယာအကြောင်းပိုသိချင်လား။ ကောင်းပြီ, ဆက်ဖတ်နေ!
Meizu E3 တွင် ၅.၉၉ လက်မ IPS LCD In-Cell မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည် FullHD + Resolution 2.160 x 1.080 Pixels of 403ppi ရှိသည့် 18:9Format အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တံဆိပ်အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
Qualcomm မှပြီးခဲ့သည့်နှစ်အောက်တိုဘာလကပြသခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Snapdragon 636၊ 260GHz အမြန်နှုန်းရှိ Kryo 1.8 ရှစ် core SoC နှင့် Adreno 14 GPU နှင့်အတူ 509nm ဗိသုကာပညာအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်သည်။။ ထို့အပြင်၎င်းပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူ Meizu သည်ဒီစက်တွင် 6GB RAM မှတ်ဉာဏ်၊ ၄ င်း၏သေးငယ်သည့်မူကွဲအတွက်သိုလှောင်မှုနေရာ 64GB နှင့်အခြားဖုန်းနှစ်မျိုးစလုံးအတွက် 128GB ကို microSD ကဒ်ဖြင့်တိုးချဲ့နိုင်သည်။ - ။
ဓာတ်ပုံအပိုင်းတွင် E3 တွင်နီလာဒေါင်လိုက်ကျောဘက်ကင်မရာတပ်ဆင်ထားပြီး၎င်းတွင်နီလာကျောက်ကပ်များဖြင့်ကာကွယ်ထားသည် ကျွန်ုပ်တို့တွင် focal aperture နှင့် Dual Pixel နည်းပညာပါဝင်သော 362MPf/ 12 ၏အဓိက Sony IMX1.9 sensor နှင့် PDAF နှင့်အတူ 350MPf/ 20 ၏အလယ်တန်းအာရုံခံ Sony IMX2.6။ ရှေ့ဖက်တွင် 8 megapixel မှန်ဘီလူးနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။f/ 2.0 aperture ဖြင့် ArcSoft algorithm ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အရေပြားကြည်လင်မှုကိုသိသာမြင်သာအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်စနစ်အားဖြင့်စက်ကိုလျင်မြန်စွာနှင့်လုံခြုံစွာသော့ဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီလိမ့်မည်။ Meizu E3 သယ်ဆောင်သောမျက်နှာ၏အသိအမှတ်ပြုမှု။
အထူးသ ဒီမိုဘိုင်း၏ dual ကင်မရာကို dual- သေံ LED Flash ဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး 1.8x အထိဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်းမရှိပဲ 2.5x optical zoom and zoom ရှိသည်။
အခြားအင်္ဂါရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း, ဤဖုန်းအတွက် Meizu ရွေးချယ်ထားသော operating system သည် Flyme 7.1.2 OS စိတ်ကြိုက်အလွှာအောက်ရှိ Android7Nougat ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ကတီထွင်ထားသောဒီဇိုင်းနှင့်ကိုယ်ဟန်အမူအရာအချို့ကိုထည့်သွင်းထားသည်။ အာရှကုမ္ပဏီတခုသည် Android Oreo ကိုသာအားကိုးနိုင်သည်ဟုထင်ပါသည် ဒီ terminal ကိုဆော့ဝဲလ်မွမ်းမံမှုဟာအဲဒါကိုတန်ဖိုးရှိတာနဲ့မကြာခင်ကြေငြာမှာပါ.
ဒီ terminal ၏ဘက်ထရီနှင့် ပတ်သက်၍ Meizu E3 သည် ၃၃၆၀mAh ဘက်ထရီကို 3.360W mCharge မြန်သောအားသွင်းနည်းပညာဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည် သေချာတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခက်ခဲတဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုပေးဖို့အချိန်တိုအတွင်းမှာရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာပါ။ ထို့အပြင်အခြားအကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်အတူ, ၎င်းတွင်လက်ျာဘက်၌ fingerprint reader တစ်ခုပါရှိသည် Sony တွင် USB Type-C port နှင့် 3.5mm Jack Port တစ်ခုရှိသည်။
1 Meizu E3 အချက်အလက်စာရင်း
2 Meizu E3 စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု
Meizu E3 အချက်အလက်စာရင်း
မျက်နှာပြင် ၅.၉၉ လက်မ FullHD + IPS LCD In-Cell (၂,၁၆၀ x 5.99 pixel resolution) 2.160ppi ။ Format 1.080: 403
လုပ်ငန်းစဉ် Qualcomm Snapdragon 636 octa-core (8x Kyro 260 1.8GHz)
ပြည်တွင်းသိုလှောင်မှု 64/128 ကို microSD ကဒ်ဖြင့်တိုးချဲ့နိုင်သည်
နောက်ဘက်ကင်မရာ dual-ton LED flash ပါ ၀ င်သော 12MPf/ 1.9 + 20MPf/ 2.6 ကင်မရာ
OS Flyme 7.1.2 OS စိတ်ကြိုက်အလွှာအောက်ရှိ Android7Nougat
အခြားအင်္ဂါရပ်များ လက်ျာဘက်၌လက်ဗွေစာဖတ်သူ။ USB Type-C ။ Dual SIM ပံ့ပိုးမှု။ 4G VoLTE dual-band Wi-Fi 802.11ac ။ Bluetooth 5.0 ။ GPS + A-GPS နှင့် GLONAAS
ဘက်ထရီ 3.360W mCharge မြန်သောအားသွင်းဖြင့် 20mAh
Meizu E3 စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု
သင် Meizu E3 ကို ယနေ့မှစ၍ ကြိုတင်ယူထားနိုင်ပါသည် မတ်လ ၃၁ ရက်မှစ၍ တရုတ်စျေးကွက်သို့ရောင်းချနိုင်မည်ဖြစ်သည်၎င်းသည် ၆ + ၆၄GB ဗားရှင်းအတွက် ၁၇၇၉ ယွမ် (~ ၂၃၁ ယူရို)၊ ၆ + ၁၂၈GB ဗားရှင်းအတွက်ယူရို ၁,၉၉၉ (~ ၂၇ ယူရို) နှင့်သိသာထင်ရှားသည့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေဖြင့်လာမည်။ \_ t Meizu E6 J-128 Edition ဟုအမည်ပေးထားသည့်ကန့်သတ်ထားသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည့်3+ 20GB ၏တတိယမျိုးကွဲရှိလိမ့်မည်လက်ဝှေ့ယမ်းကတ်ပြားနှင့်အထူးဒီဇိုင်းပါသည့်အထူး SIM ကဒ်ဖယ်ရှားရေးကိရိယာတစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ ဤတတိယပုံစံသည်ယွမ် ၂,၄၉၉ (ယူရို ၃၂၁) ခန့်ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီ၏အလယ်အလတ်တန်းစားမိုဘိုင်းအသစ်ဖြစ်သော Meizu E3 ကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြပါသည်